Izindaba - I-Bagasse Plant Fiber
I-Melanoma ibalelwa ku-4% kuphela wawo wonke umdlavuza wesikhumba kepha iphakathi kwezimila ezinqamulelayo ezibulala kakhulu. IDacarbazine yisidakamizwa esithandwayo ekwelapheni i-melanoma eBrazil ngohlelo lwezempilo lomphakathi ikakhulu ngenxa yezindleko zayo eziphansi. Kodwa-ke, ingumenzeli we-alkylating wokucaciswa okuphansi futhi inika impendulo yokwelashwa kuma-20% kuphela wamacala. Eminye imishanguzo etholakalayo yokwelashwa kwe-melanoma iyabiza, futhi amangqamuzana ama-tumor ngokuvamile aqala ukumelana nale mithi. Ukulwa ne-melanoma kudinga inoveli, imishanguzo ethize esebenza ngempumelelo ekubulaleni amangqamuzana ezimila emithi. I-Dibenzoylmethane (1,3-diphenylpropane-1,3-dione) etholakala kuma-antitumor agents. Kulolu cwaningo, siphenye umphumela we-cytotoxic we-1,3-diphenyl-2-benzyl-1,3-propanedione (DPBP) kumaseli we-B16F10 melanoma kanye nokuxhumana kwayo ngqo ne-molecule ye-DNA isebenzisa ama-tweezers we-optical. I-DPBP ikhombise imiphumela ethembisayo emayelana namaseli wesimila futhi yaba nenkomba yokukhetha engu-41.94. Futhi, sikhombise ikhono le-DPBP lokuxhumana ngqo ne-molecule ye-DNA. Iqiniso lokuthi i-DPBP ingasebenzisana ne-DNA in vitro isivumela ukuthi sicabange ukuthi ukuhlangana okunjalo kungenzeka futhi ku-vivo futhi, ngakho-ke, ukuthi i-DPBP ingaba yindlela yokwelapha iziguli ezinama-melanoma amelana nemithi. Lokhu okutholakele kungakhombisa ukwenziwa kwemithi emisha nephumelelayo.
Isakhiwo sephesenti lokufa kwamangqamuzana atholakele inhlanganisela ye-DPBP emelene nohlu lwe-melan-A ne-B16F10 ezindaweni ezahlukahlukene. Izinkomba zokukhetha (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) kwakungu-41.94.
Ishicilelwe ngu-Elsevier BV
I-Dibenzoylmethane (i-DBM) isakhi esincane se-licorice kanye ne-analogue ye-β-diketone ye-curcumin. Ukondla i-1% DBM ekudleni kuma-Sencar amagundane ngesikhathi sokuqala kanye nezikhathi zangemva kokuqalisa kuvinjelwe kakhulu i-7,12-dimethylbenz [a] anthracene (DMBA) -kunciphise ukuphindaphindwa kwesimila se-mammary kanye ne-mammary tumor incidence nge-97%. Ngokuqhubekayo ezifundweni ze-vivo ukucacisa izindlela ezikhona zesenzo esivimbelayo se-DBM, ukondla i-1% DBM ekudleni kwe-AIN-76A ukuvuthisa amagundane e-Sencar amasonto ama-4-5 kwehlise isisindo esimanzi sesizalo ngo-43%, kwavimbela izinga lokwanda yamaseli we-mammary gland epithelial cell ngo-53%, i-uterine epithelium ngo-23%, ne-uterine stroma ngo-77%, lapho amagundane abulawa phakathi nesigaba sokuqala se-estrus somjikelezo we-estrous. Ngaphezu kwalokho, ukondla i-1% DBM ekudleni kuma-Sencar amagundane emavikini ama-2 ngaphambili, ngesikhathi nangesonto eli-1 ngemuva kokwelashwa kwe-DMBA (intubation ye-1 mg DMBA ngegundane kanye ngesonto amaviki ama-5) kuvimbele ukwakheka kwenani eliphelele le-DMBA-DNA elithathayo ku-mammary izindlala ngo-72% zisebenzisa i-post-32P-labeling assay. Ngakho-ke, ukondla ukudla okungu-1% kwe-DBM kumagundane akwa-Sencar kuvimbele ukwakheka kwe-DMBA – i-DNA adducts kuma-gland we-mammary futhi kwehlise izinga lokwanda kwe-mammary gland ku-vivo. Le miphumela ingachaza izenzo eziqinile zokuvimbela i-DBM yokudla kuma-mammary carcinogenesis kumagundane.
Isikhathi Iposi: Aug-12-2020